Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukufeza ekuphileni, hhayi ukukwazi sithandwe abanye, kuzodingeka ukuzama izikhathi eziningana eside. umbuthano womphakathi kungacacisa ukuthi okuningi. Kungakhathaliseki ukuthi ukuqala ibhizinisi, ufuna umsebenzi omusha, noma ngisho uzama ukusebenzisa webanga, udinga ukuphola ezinhle. Udinga qiniseka ukufunda ngokushesha ukuze uhlanganise omjwayele nokuthi ngokushesha bathandile abantu. Wenzenjani ukukwenza? Lapha eyishumi nesithupha izindlela ezilula ezisebenza ngempela, uma uwakhumbule futhi uqala ukuzisebenzisa. Uzokwazi ukufezekisa konke ofuna emaminithini angu-5 inkhulumomphendvulwano. Ngakho, yini okudingeka uyenze ukuze ube yinkakha zokuxhumana?
Thola abangani abasha
Lokhu kubalulekile! A nesithakazelo esiqotho kubantu bese uzama ukwenza abangane nabo. Ukuze aphumelele, ucabangani nge ngaphambi kokuqala yokuxhumana - ukuthi baziphathe kanjani, uma lowo muntu kwaba umngane wakho oseduze. Ungacabangi mayelana esisuseni, ungazami ukuthengisa into noma usitshele ngawe. Zama ukuba umngane. Lalela ndoda. Yizwa inkinga yakhe, cabanga, kungasiza. Usebenza ngokukhululekile.
Yiba amaziyo ezibalulekile
Wonke umuntu ufuna ukuba bathuthukise ukuphila kwabo. Ngisho noma nje smile umngane omusha, ungasiza naye. Ngezinye izikhathi kungenzeka ukunikela incwadi ozithandayo, ukwenza indaba emfushane khulula, uma umklami, noma sikunikeze isikhundla evulekile owaziwa lowo ufuna umsebenzi. Kunoma isiphi isimo ungaba okungenani usizo oluncane. Sibheke komngane ezintsha njengoba ithuba. Yiba Umuntu ophanayo futhi evulekile, ukusiza abanye baba yimpumelelo.
Hlola futhi uthole ukuthi yini okudingeka wena emhlabeni
Elungile ulwazi lwakho, ngcono. Uma une ithuba, abazama ukufunda ngaYe amaziyo yakho entsha phambi kokuthi uqale ukuxoxa. It akadingi ukusetshenziswa, futhi ngakho empeleni ungakwazi ukuqonda kwakhe futhi usize. Funda ibhulogi futhi ufunde mayelana izincwadi zakho ozithandayo, hlola izintshisekelo, ufunde mayelana nomndeni, ukwenza izinto zokuchitha isizungu kanye nezithakazelo. Kubalulekile kuwe noma yiluphi ulwazi. Kuleli zwe lanamuhla-intanethi ingaba yithuluzi eliwusizo kakhulu, ngakho ungaphuthelwa leli thuba kakhulu ukwazi kusengaphambili umuntu eduze.
Thola kunokuthile ofana
Bonke abantu enifana ngazo. Cabanga ukuthi lokhu umdlalo - ukuthola lokho esihlanganisa wena nabangani abasha. Ukushesha Uyaqaphela yini ukuthi imibono, izithakazelo kanye share izinkolelo, ngokushesha uyoba kancane eduze. Ukuze ukhulume esidlule, cishe ukudla ozithandayo noma edolobheni langakini. Qhubeka sijulise wenhlanganyelo, kuze inquma eziyizihibe.
Indlela engcono kakhulu kube mnandi ukukhuluma - ukuzizwa isithakazelo. Ngiyajabula ukuthola kusukela nezinye ulwazi olusha, ulalele lokho abakushoyo. Funda ukuthi yini inani interlocutor. Musa nje bakwazi ukugcina ingxoxo iqhubeka, kodwa futhi ukwazi umuntu ongcono. Abantu bathanda ukwabelana ngezindaba zabo. Yiba kwalabo abakulungele ukubezwa.
Bonisa ubuntu bakho
Kufanele ube nomuntu ezithakazelisayo. Ukuze wenze lokhu, vula i zokuzilibazisa zabo, baqonde lokho ukubabela ekuphileni, futhi yini wena oyikholelwayo ukuthi sizimisele ukuxoxa nabanye. Uma ngokomzwelo, usukulungele lingakunika amandla abanye. Khuluma kanye nokwabelana ngolwazi. Khona-ke uyoba ukuheha nabangane, wonke umuntu ufuna ukukhuluma nawe.
Yiba umuntu eliyingqayizivele
Ungazami ukubheka abanye bese ukopisha othile, ungemi endleleni. Yiba umuntu evulekile nangokomzwelo. Yabelana izindaba zakho kanye nezifiso. Khuluma nomndeni kanye nezinkinga zakho. Ukukhuluma nje ngezwe sezulu, ngeke futhi ngingafune kufeza lutho. ubuqotho kuphela ingakusiza.
Sebenzisa amagama angukhiye ezibalulekile
Uma sibamba ngekhanda amagama sobsednikov. Akukho nicer kuka ukuzwa ingxoxo igama lakho, ikakhulukazi kusukela othile osanda ukuhlangana nani. Izaba ukuba wazi ngekhanda kubo ababi, ngeke zisebenze. Akekho ukuthi engenzi uphume kalula, kudingeka ukuzijayeza! Bhala phansi ulwazi oludingayo, phinde it, sebenzisa ukugcina ubudlelwane. Ingabe lokho okuthandayo, kodwa khumbula. Konke lokhu kuyokusiza ukuba ube umngane okuningi ezithakazelisayo futhi ajabulisayo.
Hlanganisa amaqembu, kunesithembiso izenzakalo, jwayelana nomunye abantu abanezifiso ezifanayo. Lokhu makube nomsebenzi wakho - ukusungulwa ukuphola. Akukho lutho aphumelela kakhudlwana nomuntu ofuna ukuba umuntu onekhono lokuxoxa yimpumelelo.
Phila ukuphila ezithakazelisayo ukulalela - kuyajabulisa hhayi kuphela ngawe kodwa futhi abanye. Ingabe into eyayingakaze yenzeke ngaphambili. Sivela zone induduzo, usebenzisana amaqembu amasha zabantu ngaphandle komzamo omkhulu. Lapho uzama kakhulu imisebenzi emisha, kulapho ingxoxo uzobe futhi kumnandi more!
Abantu bakhangwa imizwelo futhi amandla, kunokuba amaqiniso ezomile nezibalo. Xoxa izindaba ngokomzwelo kaningi ngangokunokwenzeka futhi ulalele izindaba zabanye. Khumbula funny izindaba, nabanye.
Thola liyabonakala ingxenye
Asikho isidingo ezizenza clown, kodwa uma into ezokwenza zibukeke ukukukhumbuza ngakho, kuyoba lula ukuba abe umuntu emnandi. Mhlawumbe nithanda engavamile izikibha, njalo ukugqoka tie noma isigqoko stylish. Isici sakho esiyingqayizivele zikhunjulwe wonke umuntu ngikuhlangabeze.
Ungaphuthelwa thuba ngibonge abantu, ngisho nezinto ezincane, kodwa ngisho ngakho esengeziwe into ebucayi. Abantu abaningi bavame ukukhohlwa mayelana ukubonga kubaluleke kangakanani. Ilokhu ukuthumela imilayezo esifushane, ama-imeyili, amanothi, noma izipho ngisho encane kulabo wakusiza. Funda indlela lokutjengisa ukuthembeka kwabo. Wonke umuntu uthanda ukuba ezibalulekile futhi okunenjongo.
Cabanga abantu njengebangani bakhe, hhayi njengabantu bangaphandle
Lapho uhamba ekamelweni, ubuka abangabazi ngokuthi singabangane esizayo, kunokuba abangabazi. Uma ubona umhlaba ngakho-ke ngeke kube lula kakhulu ukwakha ubudlelwano nabanye.
Lutho ibiyoba engenangqondo ukube ngesikhathi inhliziyo ngeke anakekele. Yiba nesithakazelo kubantu ngobuqotho. Une ukushintsha isimo sakho sengqondo ngabantu, ukuze ube umholi ngempumelelo ekuxhumaneni.
Ubudlelwano akunakwenzeka, ehlezi ekhaya. Kumele siphume emphakathini, ukuxhumana futhi ufunde. Ungaqala kunethiwekhi, kodwa empeleni zathola imiphumela yangempela. Lutho ungalunga kakhulu ukwedlula umhlangano evamile. Ungazami ukufihla ngemuva zobuchwepheshe.
Indlela ukucacisa yobudala walokho okubomvu-izimfudu ngu ukubukeka kwabo?